Inona ny plankton: toetra, karazany ary lanjany | Green Renewable
Portillo Alemanina | 26/08/2021 11:06 | Tontolo_iainana
Ny zavamananaina dia mihinana amin'ny alàlan'ny fanarahana rojom-bary izay mifototra amin'ny ambaratonga samihafa izay zavamananaina no mihinana ary ny hafa kosa nohanina. Ny fototry ny rohy ao amin'ny rojom-pitaterana an-dranomasina dia plankton. Betsaka ny olona tsy mahalala inona ny plankton na ny maha-zava-dehibe azy. Izy io dia ny fiandohan'ny rojo sakafo ary voaforona zavamananaina bitika kely afaka fotosintesis. Ny asany lehibe indrindra dia ny sakafo ho an'ny zavamananaina an-dranomasina maro. Noho izany dia zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny tontolo iainana sy ny fiainana an-dranomasina izy io.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny atao hoe plankton, ny lanjany ary ny mampiavaka azy.
1 Inona no atao hoe plankton
2 Karazana plankton
3 Zava-dehibe amin'ny fiainana
Plankton dia vondrona zavaboary mitsingevana amin'ny fivezivezin'ny onjan-dranomasina. Ny teny hoe plankton dia midika hoe mpirenireny na mandehandeha. Ity vondrona zavaboary ity dia samy hafa be, samy hafa ary manana toeram-ponenana ho an'ny rano velona sy ny ranomasina. Any amin'ny toerana sasany dia afaka mahatratra hatrany amin'ny concentrations hatramin'ny olona an'arivony tapitrisa maro izy ireo ary mihombo ny ranomasina mangatsiaka. Ao amin'ny rafitra mijanona sasany, toy ny farihy, dobo na kaontenera misy rano mbola misy, dia afaka mahita plankton ihany koa isika.
Miankina amin'ny sakafonao sy ny karazana endriny, dia misy karazana plankton. Hizara roa amin'izy ireo isika:
Phytoplankton: Plankton zavamaniry izay tena mitovy amin'ny an'ny zavamaniry ny hetsika satria mahazo angovo sy zavamananaina amin'ny alàlan'ny fotosintesis. Izy io dia afaka miaina ao anaty sosona rano mamindra hazavana, izany hoe ao amin'ny faritry ny ranomasina na ny rano izay ahitany tara-masoandro mivantana. Izy io dia afaka misy amin'ny halalin'ny 200 metatra, izay kely sy vitsy ny tara-pahazavana amin'ny masoandro. Ity fitoplankton ity dia cyanobacteria, diatoms, ary dinoflagellates no betsaka indrindra.
Zooplankton: izy io dia zooplankton izay mihinana ny fitoplankton sy ireo zavamananaina ao amin'ilay vondrona iray ihany. Crustacea, jellyfish, olitra hazandrano ary zavaboary kely kokoa no anaovana azy. Ireo zavaboary ireo dia azo avahana amin'ny vanim-potoana iainana. Misy zavamananaina sasany izay ampahany amin'ny plankton mandritra ny tsingerin'ny fiainany ary antsoina hoe holoplanktons. Etsy ankilany, ireo izay ampahany amin'ny zooplankton mandritra ny vanim-potoana iray amin'ny fiainany (mazàna rehefa dingana mihady izy) dia fantatra amin'ny anarana hoe meroplankton.
Bakteria Plankton: Izy io dia karazana plankton noforonin'ny vondron'olona bakteria. Ny asany lehibe indrindra dia ny famotehana ny fako ary mitana andraikitra lehibe amin'ny tsingerin'ny biogeochemical ny karbaona, ny azota, ny oxygen, ny phosfor ary ny singa hafa. Izy io koa dia mihinana amin'ny alàlan'ny rojom-pisakafoanana.
Virosy planktonika: viriosy anaty rano izy ireo. Ny viriosy bakteria sy ny ahidrano eukariotizy no tena ahitana azy ireo. Ny asany lehibe indrindra dia ny famerenana amin'ny laoniny ny otrikaina amin'ny tsingerin'ny biogeochemical ary mamorona ampahany amin'ny rojom-bary mahavelona.
Ny ankamaroan'ny zavamananaina plankton dia mikraoskaopy amin'ny habeny. Mahatonga azy tsy ho hitan'ny mason'ny maso izany. Ny haben'ny salan'ireto zavamananaina ireto dia eo anelanelan'ny 60 microns sy milimetatra. Ireto misy karazana plankton mety misy ao anaty rano:
Ultraplankton: Izy ireo dia refesina manodidina ny 5 microns. Izy ireo no zavamiaina bitika bitika indrindra, ao anatin'izany ny bakteria sy ny flagellate kely. Flagellates dia ireo zavaboary manana flagella.
Nanoplankton: Mirefy 5 ka hatramin'ny 60 metatra ny refiny ary misy microalgae tsy mitovy sela, toy ny diatom kely sy coccolithophores.
Microplankton: Izy ireo dia lehibe kokoa, mahatratra eo anelanelan'ny 60 micron sy 1 mm. Eto isika dia mahita microalgae unicellular, olitra mollusk ary copepods.
Plankton antonony: ny mason'olombelona dia afaka mahita zavaboary mitovy habe aminy. Mirefy 1 ka hatramin'ny 5 mm ny refiny ary misy olitra hazandrano.
Plankton lehibe: eo anelanelan'ny 5 mm sy 10 cm ny habeny. Tonga eto ny sargasso, ny salpa ary ny jellyfish.
Giant plankton: zavaboary mihoatra ny 10 cm ny habeny. Manana jellyfish isika eto.
Ny zavamananaina rehetra izay misy ao amin'ny plankton dia manana karazana vatana samihafa ary mamaly ny filan'ny tontolo iainana onenan'izy ireo. Ny iray amin'ireny filan'ny vatana ireny dia ny fivoaran'ny rano na ny viscosity amin'ny rano. Ho azy ireo, ny tontolo iainana an-dranomasina dia viscous ary ilaina ny mandresy ny fanoherana ny fivezivezena ao anaty rano.
Betsaka ny paikady ary ny fepetra ampifanarahana amin'ny fampiroboroboana ny rano mitsinkafona dia mety hampitombo ny fahafaha-mivelona. Ny fampitomboana ny velaran'ny velaran'ny vatana, ny fampidirana vongan-tavy amin'ny sitoplasma, ny fitifirana bala, ny fandatsahana ary ny rafitra hafa dia paikady sy fampifanarahana ahafahana miaina amin'ny tontolo an-dranomasina sy rano velona. Misy zavaboary hafa manana fahaiza-milomano tsara, noho ny flagella sy ireo appendage lokomotika hafa, toy ny copepods.
Ny viscosity an'ny rano dia miova miaraka amin'ny maripana. Na dia tsy mampiseho maso fotsiny aza isika dia mahatsikaritra izany ny mikraoba. Any amin'ny rano mafana dia ambany ny viscosity amin'ny rano. Misy fiatraikany amin'ny buoyancy an'ny tsirairay izany. Noho io antony io dia namorona cyclomorphosis ny diatom, dia ny fahaizana mamorona endrika vatana isan-karazany amin'ny fahavaratra sy ririnina mba hifanaraka amin'ny fiovan'ny hafanan'ny rano misy hafanana.
Zava-dehibe amin'ny fiainana
Ny olona dia milaza foana fa ny plankton dia singa manan-danja amin'ny toerana onenan-dranomasina. Ny lanjany dia miankina amin'ny rojom-pisakafoanana. Ny tranokalan-tsakafo eo amin'ny mpamokatra, ny mpanjifa ary ny decomposer dia miorina ao amin'ny biome. Phytoplankton dia afaka manova ny angovo avy amin'ny masoandro ho angovo azo ampiasain'ny mpanjifa sy ny decomposer.
Phytoplankton dia lanin'ny zooplankton, izay lanin'ny karnivora sy omnivora indray. Izy ireo dia mpiremby zavaboary hafa ary ny decomposers mihinana ny faty. Izany no fomba namoronana ny rojom-pisakafoanana rehetra ao amin'ny toeram-ponenana anaty rano.
Ny Phytoplankton dia mifoka karbonika dioksida be dia be amin'ny alàlan'ny fotosintesis ary manome ny 50% ny ôksizenina miaina anaty rivotra. Ny plankton maty dia mamokatra soson-tsavony, rehefa vita ny fosily, dia mamokatra ilay menaka irina mafy.
Araka ny hitanao dia indraindray ny zavatra tena manandanja dia kely dia kely amin'ny habeny. Amin'ity tranga ity, ny plankton no fototry ny sakafon-dranomasina. Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny atao hoe plankton, ny mampiavaka azy ary ny maha-zava-dehibe azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Inona no atao hoe plankton